False news — မှားယွင်းသောသတင်း – Free Expression Myanmar
Reporting inatruthful and balanced way is an important professional goal for journalists.
But freedom of expression not limited to merely truthful information.
Journalists should not be compelled to publish only information whose truthfulness is ascertained.
Limiting news output to only “true” or State-sanctioned news actually posesathreat to democracy itself.
Statutory prohibition of false news reporting is unacceptable under international law for the following reasons:
False news laws can haveaserious chilling effect on the work of reporters. Facts and opinions are not always easily separated.
In many cases, opinions are expressed through superficially false statements, such as sarcastic, satirical, hyperbolic or comical remarks.
False news provisions fail to recognise that it is often far from clear what the ‘truth’ onaparticular matter is.
The practice of States which still have false news provisions on the books shows the great potential for their abuse. Often these laws are used to oppress political opposition and silence human rights defenders.
Inatruly democratic society, the way foraState to respond to any false news coming into circulation would be to counter it with correct information, not to clamp down on the press publishing the allegedly false news.
Access to the media should beasufficient tool for State agencies to diffuse false messages.
The appropriate way to seek responsibility for journalists for false news reporting is throughamedia council or another self regulatory body which should establish if the reporter knew of the falsity of the statement and what actions he has taken to verify the truthfulness of the report.
မှန်ကန်တိကျပြိးဘက်မလိုက်ဘဲသတင်း အစီရင်ခံခြင်းသည် သူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်သည် မှန်ကန်တိကျသောသတင်းအချက်အ လက်ကို ပေးရုံမျှအဖြစ်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပေ။
ဂျာနယ်လစ်များသည် မှန်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသော သတင်းအချက်လောက်ကိုသာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် မကန့်သတ်သင့်ပေ။
ကန့် သတ်ထားသောမှန်ကန်သော တစ်နည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကကန့်သတ်၊သတ်မှတ်ထားသော သတင်းမျှလောက်ကိုသာထုတ်ပြန်ရလျှင် စင်စစ်တွင်ဒီမိုကရေစီကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပြုလာခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
သတင်းမှားတင်ပြခြင်းကိုဥပဒေအရတားဆီးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရ လက်မခံနိုင် သည့် အကြောင်းမှာအောက်ပါအချက်များကြောင့်ဖြစ် သည်။
ပထမဦးစွာ သတင်းမှားဥပဒေသည်သတင်း ထောက်များ၏လုပ်ငန်းခွင်တွင်် စိတ်ပျက်ဖွယ် အကျိုး သက်ရောက် မှုရှိသည်။ အချက်အလက်ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်ယူဆချက်များသည်အမြဲတန်းလွယ်ကူစွာ ခွဲခြား၍မရနိုင်ချေ။
ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်အယူအဆများသည်အပေါ်ယံသဘောသတင်းမှားများ မှတစ်ဆင့် ဖေါ်ပြလေ့ရှိသည်။ သရော်စာများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
သတင်းမှားပိတ်ပင်မြစ်ခြင်းသည် အမှန်ဆိုသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိ စေနိုင်သောသဘောမှဝေးကွာသွားသောသဘောရှိသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သတင်းမှားပိတ်ပင်ခြငး် ဥပဒေကိုစာအုပ်ထဲတွင်ရှိနေ ခြင်းပင်လျှင် ယင်းကိုအလွဲသုံးစားပြုနိုင်ချေ အလွန်အမင်း မြင့်မားလျှက် ရှိနေပေသည်။ များသောအား ဖြင့်ထိုဥပဒေများသည် ဆိတ်ဆိတ် နေသော လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများနှင့် အတိုက်အခံနိုင်ငံ ရေး အဖွဲ့များကိုဖိနှိပ်ရန်သုံးတတ်သည်။
စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် သတင်းမှားတစ်ခုသည် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့်ပြန့်နှံ့လာ မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် သတင်းအမှန်ဖြင့်သာတုံ့ပြန်ရမည်။ သတင်းမှားထုတ်ပြန်သော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူကို အရေးယူမှုမပြုပေ။
မီဒီယာအခွင့်အလမ်း ရှိစေခြင်းက နိုင်ငံတော်အေဂျင်စီများအားလုံးအတွက် သတင်းအမှားကို ပယ်ဖျက်ဖို့ အထိရောက်ဆုံးကရိယာတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
ဂျာနယ်လစ်များ သတင်းမှားရေးသားခြင်းအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိစေခြင်းငှာ အသင့်လျော်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ မီဒီယာကောင်စီ (သို့မဟုတ်) မိမိဘာသာ စည်းကမ်းထိန်း ချုပ်ခြင်း မှတဆင့်ဖြစ်သင့်ပြီး ၊ ကောင်စီမှနေ၍ ဂျာနယ်လစ်များသည် ဘယ်သတင်းဖော်ပြချက်မျိုးက မှားယွင်းသောသတင်းမျိုဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့အနေဖြင့်လည်း သတင်းအမှန်ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုတာ သိ မသိ ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
False news in Myanmar law
Telecommunications Law Art 68 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၈၊
Broadcasting Law Art 81-86 ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၁ မှ ၈၆ထိ။
Tagged with: Broadcasting Law, False news, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ